शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ नया निर्देशिका जारी गरेर काम भएको दाबी गरेतापनि मुख्य काम हुन सकेको छैन । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
विभिन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सबै दराजमा थन्किएका छन् । कर्मचारी सरुवा अस्तब्यस्त बनेको छ । पछिल्लो समय सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
तयार भएको मस्यौदामाथि छलफल गरी, कानून र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने विषयमा मन्त्री मौन देखिएका छन् ।मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीको ध्यान ऐन बनाउने तिर नभै विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन र नया निर्देशिका जारी गर्ने तर्फ देखिएको छ । मन्त्रीले ऐन ल्याउने विषयमा वास्ता नगरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन ।
पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । प्रतिवेदन बुझ्यो, थन्क्याइयो , प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने विषयमा मन्त्री ज्यूलाई मतलब नै छैन–कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको टाउको दुखाइको विषय रहेको शिक्षक व्यवस्थापन र दरबन्दीको विषय अन्योल देखिएको छ । मन्त्रीसंग कुरा ग¥यो, काम गर्छु भन्नुहुन्छ, केही कामै भएको देखिदैन–स्रोतले भन्यो ।
Posted on November 14, 2018 Author Categories शिक्षा स्वास्थ्य, समाचार
Previous Previous post: कांग्रेसका यी चार ठूला नेताहरूको राजीनामा माग ! सिटौला समूहलाई तनाव
Next Next post: पुस मसान्तसम्म तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन हुन्छन्: मन्त्री लालबाबु